Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » I-Airbnb: iidolophu ezili-11 eziphambili zaseLatin America zabahambi baseMelika
Ukhenketho lokuzonwabisa • Iindaba zeAruba Breaking • Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zaseColombia zokuPhula • Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-Airbnb: iidolophu ezili-11 eziphambili zaseLatin America zabahambi baseMelika.
Abahambi nje kuphela e-US abafuna iindawo zokubonelela ngenkcubeko kunye nolwandle olushushu, kodwa uninzi lwabantu baseLatinx bajonge ukudibanisa neengcambu zabo kwaye bandwendwele indawo yabo yemvelaphi ukubona abazali, ootatomkhulu kunye nosapho olongezelelekileyo.
ILatin America ngummandla ogcwele inkcubeko, imbali kunye nomtsalane omkhulu wabakhenkethi.
Ngokweenkcukacha ezivela kwa-Airbnb, ummandla waseLatin America sele usisiqhelo kubahambi abasuka e-US.
ILatin America imele ukhetho olufikelelekayo kubakhenkethi baseMntla Melika ngexabiso eliphakathi ngobusuku obungaphantsi kweedola ezili-150.
ILatin America ngummandla ogcwele inkcubeko, imbali kunye nezinto ezinomtsalane kubakhenkethi abathe kule minyaka idlulileyo bonyuka ekuthandeni kwabahambi abasuka eUnited States.
Ukongeza, ukuba noluntu olubanzi lweLatino, bekusoloko kukho imeko yohambo lommandla ukuphuhlisa kunye nokugcina ubudlelwane bosapho obuyimfuneko namhlanje kunakuqala.
Ngokwedatha evela AirbnbUmmandla waseLatin America uye waba ngumkhwa kubakhenkethi abavela e-US.
Ngokusekwe kwinani lophando olwenziwe eqongeni, ezona zixeko zili-12 zidumileyo zaseLatin zezi:
EMexico City, eMexico
IPlaya del Carmen, eMexico
EPuerto Penasco, eMexico
ICagagena de Indias, eColombia
Xa kufikwa kwixesha lasehlotyeni, ezona ndawo zidumileyo yayizizilwandle, ngakumbi eMexico apho iPlaya del Carmen kunye ne-Ensenada zazisiya khona ngo-2021, zonyuka izikhundla ezi-6 xa kuthelekiswa no-2019, kunye neTulum, eyayisuka kwinani lesi-7 ukuya kwinombolo yesi-3. kuluhlu, ngokusekwe kwinani lophando.
Iindawo esiXekweni nazo ziyavela kuluhlu, kubandakanya City Mexico kunye neMedellín, bobabini babonwa ngesithembiso sabo senkcubeko.
Ummandla umele ukhetho olufikelelekayo kubakhenkethi baseNyakatho Melika ngexabiso eliphakathi ngobusuku obungaphantsi kwe- $ 150.00.